Nanainga Towers fifamoivoizana i Shina ho an'ny famokarana herinaratra, mpamokatra sy mpamatsy fotodrafitrasa indostrialy | Yubing
Izy ireo dia mifanaraka tsara amin'ny fampiharana indostrialy mavesatra amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra, zavamaniry zezika, kompania petrochemical ary fanadiovan-tsolika ary ny ankamaroan'ny tilikambo vaovao dia vita amin'ny fiberglass misy afo noho ny tanjany mahery sy ny fanoherana fanoherana / harafesiny.
Izy io dia sehatr'asa maro be indrindra raha jerena ny fangatahana fisehanana samihafa. Ny tilikambo an-tsipika dia ny lamina mahazatra noho ny antony mahomby, fa ny tsipika mifanindran-dàlana, miverina miverina, ary ny fikirakirana boribory dia safidy ihany koa rehefa mitaky fomba hafa ny drafitry ny tetika.
Ny fametrahana boribory dia mety ho vahaolana mety amin'ny tranokala voafetra.
Ny fananganana ny tilikambo amin'ny fomba mivantana dia manome ny fandaminana amin'ny fanjifana herinaratra kely indrindra, ao anatin'izany ny fihenan'ny angovo fanina sy ny lohan'ny pumping ambany indrindra. Raiso ny fidirana mahomby miditra amin'ny rivotra, ahena ny haavon'ny tilikambo sy ny vidiny.
Ny fametrahana tilikambo any an-damosina dia mety tafiditra ao anatin'ny fetran'ny tranokala rehefa tsy azo atao ny mametraka in-line. Raha ampitahaina amin'ny fandaminana an-tsipika, ny angovo mpankafy sy ny lohan'ny pumping dia samy nitombo izay hitondra amin'ny vidiny avo lenta fa ny fahombiazan'ny hafanana ambany.
Fampifanarahana an-tsipika mifanila
Raha tsy azo atao ny mametraka ny tilikambo amin'ny tsipika tokana, tsy maninona ny manasaraka sy mandamina ireo tilikambo ho lasa singa roa na maromaro voalamina ao anaty fikirakirana an-tsipika mifanitsy amin'ny hevitra manaraka:
Izy io dia hampihena ny lohan'ny paompy amin'ny alàlan'ny fizarana ny faritra hidiran'ny rivotra eo anelanelan'ny tilikambo roa.
Mety hampihena be ny vidin'ny tilikambo azo avy amin'ny fihenan'ny haavon'ny tilikambo sy ny fahombiazany.
Mampihena ny angovo an'ny mpankafy izany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fahombiazany amin'ny tsindrona rivotra roa.
Mampihena ny halavany napetraka izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny faritra eo anelanelan'ny tilikambo ho an'ny lavaka paompy, ny fantson-drano sy ny fahazoana miditra.
Ny fahaizana mafana azo itokisana kokoa amin'ny fanapahana ny rivotra dia misintona amin'ny antsasany ny rano latsaka.
Fikojakojana mora kokoa sy fiasa an-tsehatra amin'ny alàlan'ny fanomezana tilikambo mora mitokana
Previous: ICE Industrial Industrial Softener System ho an'ny rano loharano mangatsiaka
Manaraka: Towers hihena-mikoriana ny tavoahangy boribory
tilikambo fananganana indostrialy atsangana
tilikambo fanamafisana indostrialy ho an'ny famokarana herinaratra